* အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ : H200*W420*D350mm
* အတွင်းပိုင်းအတိုင်းအတာ: H190*W400*D300mm။
* အထူ- တံခါး--4မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်-2မီလီမီတာ။
* N.W.(kg): 12kg။
* လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ် + လက်ဗွေ။
* စွမ်းရည်- 14"-17" လက်ပ်တော့များ။
* အရောင်: အနက်ရောင်။
* ထိတွေ့မျက်နှာပြင် + LED မျက်နှာပြင်။
* နောက်ကျောတွင် အပေါက် ၂ ပေါက်။
* Electrostatic powder coat သုတ်ဆေးပြီးခြင်း။
* အီလက်ထရွန်နစ်အစားထိုးခြင်းဖြင့် အရေးပေါ်အဖွင့်များ& စက်ခလုတ်။
* အသုံးပြုနိုင်သော မြင်ကွင်း- ဟိုတယ်အခန်း/ ရုံးခန်း/ အိပ်ခန်း/ စာကျက်ခန်း/ ဧည့်ခန်း။
1. ဇိမ်ခံလက်တော့ပ်ဆိုဒ်အံဆွဲ လက်ဝတ်ရတနာသေတ္တာ။
2. တံခါးကို 90 ဒီဂရီတွင်ဖွင့်နိုင်သည်။
3. နောက်ကျောတွင် အပေါက် ၂ပေါက်ရှိသည်။
4. စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်အတွက် အနီရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
5. 4x AA ဘက်ထရီထည့်ပါ။
8. လက်ဗွေဖြင့် ဖွင့်ပါ။
9. ဘက်ထရီဗလာဖြစ်သောအခါ၊ သင်သည် ၎င်းကိုဖွင့်ရန် ပြင်ပဘက်ထရီအိတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဇိမ်ခံ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် လက်ဝတ်ရတနာ လုံခြုံသည်။
တံခါးကို 90 ဒီဂရီဖွင့်နိုင်သည်။
နောက်ကျောတွင် အပေါက် ၂ပေါက်ရှိသည်။